Si bilaash ah uga soo degso Super Hexagon barnaamijka Apple Store | Wararka IPhone
Soo dejiso Super Hexagon bilaash ah mahadnaqa barnaamijka Apple Store
Pablo Aparicio | | Ciyaaraha IPhone, Iibka
Apple waxay mar labaad na siineysaa codsi bilaash ah waqti xaddidan oo ka socda arjiga Apple Store. Markan waxaan leenahay Super Hexagon, ciyaar tijaabin doonta dib-u-eegiskeena iyo isku-duwiddayada shaxanka oo ka tagaya waxyaabo badan oo la doonayo. Laakiin hey, waa bilaash, sax? Waxa ugu fiican ayaa ah inaan hoos u dhigno ka dibna waxaan go'aan ka gaari doonnaa haddii aan jeclaanno iyo in kale iyo, nasiib darro, waxay abuureysaa balwad.
Waxa aan ku sameyn doonno Super Hexagon waa xakamee saddexagalka u dhaqaajinta dhinaca midig ama bidix si loo helo dariiqa ay ka tageen hexagonnada ku hareeraysan. Waxay umuuqataa wax fudud, laakiin waa inaan diirada saarnaa ama waxaan ku dhamaaneynaa "cunista" mid kamid ah derbiyada lix geesoodka ah ee nagu hareeraysan.
Sida loo soo dejiyo Super Hexagon
Marka hore waxaan jecelahay inaan cadeeyo taas waxaa lagu helaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Apple Store, in aan lagu khaldin App Store. Dukaanka Apple waa bakhaarka ay ku iibiyaan qalabka sida iPhone, Mac ama Beats headphones; App Store waa dukaanka arjiga ee iPhone, iPod iyo iPad. Waan faalleeyaa sababtoo ah waa wax caadi ah in la akhriyo faallooyinka in dalabku uusan lacag la'aan ahayn ama aysan jirin wax ikhtiyaar ah oo lagu helo bilaash.
Waxaan fureynaa arjiga Apple Store waanan ciyaarnay Dukaamada.
Waxaan u siibaneynaa si dallacaaddu u muuqato.
Waan ciyaarnay Soo dejiso Bilaash ah.
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaan ku ciyaareynaa Sii wad.
Marka xigta, waanu taabanaynaa sarrifka. Waxay nagu geyn doontaa App Store waana inaan dhignaa furaha sirta ah ama isticmaalnaa Aqoonsiga Taabashada.
Haddii aadan haysan codsiga Apple Store, waxaad ka rakibi kartaa xiriiriyaha aan hoos ku dhigay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Soo dejiso Super Hexagon bilaash ah mahadnaqa barnaamijka Apple Store
Juan Andres dijo
Dib dambe looma heli karo "baahida sare" awgeed
Ku jawaab Juan Andres
Ku jawaab Manolo
Apple waxay ogeysiinaysaa dadka isticmaala iCloud ee isbeddelada keydinta
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iOS 9